नेपालमा वर्गको मात्रै कुरा गर भन्नेहरु छद्मभेषी उत्पीडनकारीहरु हुन् – CentralKhabar – No 1 Online News Portal from Nepal
नेपालमा वर्गको मात्रै कुरा गर भन्नेहरु छद्मभेषी उत्पीडनकारीहरु हुन्
सेन्ट्रल डेस्क प्रकाशित मिति : १८ श्रावण २०७८, सोमबार १२:४३
सर्वोच्च अदालतले आरक्षण जातीय हैन वर्गीय आधारमा दिनु भनेर फैसला गरेछ । यो गलत हो । यसरी :
१) नेपालमा “वर्गवादी” जालझेल धेरै अघिदेखी चल्दै आएको छ । यसले गर्ने तर्क एकदमै साधारण छ- जातको हैन वर्गको कुरा गर । क्षेत्र, लिङ्ग, समुदाय, अल्पसंख्यक, आदिवासीको कुरा हैन वर्गको कुरा गर । सबै समस्या “वर्ग” मा छ ।” त्यसो भन्नुको भित्री उद्देश्यपनि प्रष्ट छ- वर्गमात्रै भनिदिएपछी त्यसको लाभ स्वत: कथित उपल्लो जाती/ क्षेत्र/ लिङ्गका मान्छेले पाउँछन् । नेपालको उत्पीडनकारी राज्यसत्ताको निरन्तरता, एकल जातीय/ क्षेत्रीय/ लैङ्गिक वर्चश्वको निरन्तरता हुन पाउँछ । त्यसैले नेपालमा वर्गको मात्रै कुरा गर भन्नेहरु छद्मभेषी उत्पीडनकारीहरु हुन् ।
२) आरक्षण कसरी पाउने र कसरी नपाउने भन्ने विषयलाई “चियाको कपमा तुफान” बनाइराख्नु पर्दैन । जुनजुन आधारमा उत्पीडन भयो त्यहीत्यही आधारमा आरक्षण दिनुपर्छ । आरक्षण कुनै दया मायाले दिइएको होइन, उत्पीडित समुदायले बलिदानपूर्ण संघर्ष गरेर प्राप्त गरेको उपलब्धी हो । एउटा जाती जर्नेल हुने अर्को पिपाभन्दा माथी जानै नपाउने, एउटाले लेखपढको बिरासत जातीय आधारमै पाउने अर्कोले वेद पढ्दा आँखामा सिसा पगालेर हालिदिने, आधा हिस्सा महिलाले युगौँसम्म सम्पूर्ण अधिकार र अवसरबाट पूर्ण रुपमा बन्चित पारिने स्थितीको क्षतिपूर्ति हो आरक्षण । त्यो भन्दा महत्वपूर्ण कुरा, नेपालको इतिहासमा सबैभन्दा धेरै आरक्षण पाएकै कथित उपल्लो जातका, पहाडका मुठ्ठीभर ब्राह्मण/ क्षत्रीहरुले हो। पढ्न पाउने, आदिवासीका भुमी कब्जा गर्न पाउने, दलित मार्न पाउने, विदेश जान पाउने ! यो सबै हजारौं वर्षदेखी पाइरहेको आरक्षण नै त थियो !
३. त्यसो भए वर्गको अथवा वर्ग संघर्षको कुनै अर्थ छैन ? बिल्कुल छ । तर, नेपालको ( खासगरी दक्षिण एसियाको हिन्दु बहुल समाजकै ) वर्ग युरोपको वर्गजस्तो होइन । यहाँको वर्ग निर्माणपनि युरोपेली वर्ग निर्माणजस्तो होइन । वर्ग नै यहाँ जातको आधारमा निर्माण भएको छ । उदाहरणका लागि सिङ्गो दलित समुदाय नै यहाँ कम्युनिस्टहरुले भन्ने “सर्वहारा” वर्ग हो । जागीर र विर्तामा हजारौं रोपनी जमिन कसरी वितरण गरियो ? राणाशासन, शाह वंशीय शासन हुँदै गणतान्त्रिक शासनमा पनि राज्यको माथिल्लो तहमा को पुग्यो ? अहिलेपनि कर्मचारीतन्त्रदेखि मुख्य व्यापारिक घराना, सेना/ प्रहरीका हाकिमदेखी स्थानीय जनप्रतिनिधिका मुख्य पदमा को छन् ? कुन जाती, कुन क्षेत्र र कुन लिङ्गको कब्जामा रह्यो यो देश ? त्यसैले नेपालको वर्ग बुझ्न वर्ण व्यवस्था, मुलुकी ऐन, शाह शासन, राणा शासन र नेपालको तथाकथित एकीकरणलाई बुझ्नुपर्छ । नेपालमा स्वयं वर्गले नै नयाँ परिभाषाको माग गर्छ ।
४. यसरी जुन आधारमा उत्पीडन भयो त्यही आधारमा आरक्षण कायम गरेपछी त्यस्तो आरक्षणको वितरण न्यायिक भयो कि भएन ? भन्ने सवाल आउँछ । उदाहरणका लागि दलितभित्रको आरक्षण कसले पायो ? निम्न वर्गले पायो कि पाएन ? यसको फैसला गर्ने अदालतले होइन स्वयं उत्पीडित समुदायले हो । त्यसो गर्न उत्पीडित समुदाय नै काबिल छ । आरक्षण खोस्ने प्रपन्चमा निम्न वर्गका मान्छेलाई कार्डका रुपमा प्रयोग गर्नु बेइमानी हो ।